Wiilkeyga nolol iyo geeri kuma hayo bil ka dib qarixii Soobe - BBC News Somali
Waa sidee xaalada dhaawicii loo qaaday Nairobi bil ka dib?
Mudo bil ah ayaa ka soo wareegtay qaraxyadii Muqdisho ka dhacay 14 kii October kuwaas oo ay ku dhinteen dad gaaraya 400 oo qof, ayna ku dhaawacmeen tiro intaa kabadan.
Qiyaastii 54 qof ayaa wali nolol iyo geeri lagu hayn, bilk a dib qarixii Soobe, waxaase loo badinayaa in ay kamid noqdeen dad badan oo aan la aqoonsan oo xubnaha jirkooda kala googo'een ka dibna la aasay.
Jamaad Cabdillahi Maxamuud ayaa wali la murugoonaysan curadkeedii oo raq iyo ruux midna aysan ku hayn balse ay ku tirisay dadkii afarta boqol gaarayay ee weerarkii Soobe ku dhintay.
Mudo todobaadyo ah Jamaad way socotay waxayna raadineysay sidii war iyo wacaal ay uga heli lahayd Cabdillahi Cismaan Faarax. Ugu dambeyntii way iska quusatay.
Waxayna BBC-da u sheegtay in guriga si weyn looga dareemay maqnaanshiyihiisa maadaama uu ahaa xooga reerka u soo kacay.
Qarixii Soobe: "Laba maalmood ayaa burburka ku hoos jiray"
"Maqnaanta Cabdillahi waxa loo dareemayay sida qof bini'aadama oo masuula loo dareemo, waayo wuxuu ahaa curadkayga, wuxuu ahaa qofka kaliya ee aan shinsanaayay, raadintiisana waqti badan ayay igu qaadatay," ayey tiri Jamaad.
Image caption Cabdillahi oo la waayay ka dib qarixii Soobe
"Waxan inbadan ka raadinay cisbitaallada, jeelasha, ka dib markii aan intaas ka soo quustay, waxaan isku dayay in aan dadka baxaya u dirro sawirkiisa oo aan iraahdo 'qof miyir daboolan oo aan lala socon oo sawirkaas ah ha la iiga soo raadiyo isbitaalada Turkiga iyo Sudan."
"Waan iska samray, waayo haddaadan samrin waxad qaadi karto malahan, isagana waan u duceeyay, waxaan u sadaqeyn karay oo masaajidda ugu dari karayna waan ugu daray, ILAAHAY kitaabkiisa midigta ha ka siiyo, marti la jecelyahay ALLE ha ka dhigo, intaasna waa ducada hooyada," ayey hadalkeeda ku dartay Hooyo Jamaad.
Korriimadii iyo waxbarashadii curudkeeda dhib badan ayay ka soo martay, sida ay sheegtay Jamaad. Markasta oo ay dib u gocatana, waxaa indhaheeda ku soo istaagayay ilmo, waxaana ku adkaata inay hadalka sii wado.
"Wuxuu dhashay xilli dalka uu aad u burbursanaa. Waxbarashadiisana waxaa ku bixiyay baati aan wareejiyo, mid ka yar wuu ii joogay asaga laakiin ma awoodin labadooda inaan waxbarasho geeyo," ayey tiri.
"Iskoolkii ugu horeeyay ee aan geeyay wuxuu ka billaabay fasalka afaraad. 2013-kii ayuuna dhammeeyay dugsiga sare, ka dib ayuu billaabay jaamacad."
Image caption Qarixii Soobe ka dib boqollaal qof oo careysan ayaa isu soo baxay
Keliya Jamaad ma aha xubnaha qoyska ee dareemaya maqnaanshiyaha Cabdillahi oo nolol iyo geeri midna aan lagu hayn, qaraxii Soobe kadib balse lagu tiriyay dhimasho. Caruurta ka yarayd oo wiilal iyo gabdhaba leh ayaa xasuusanaya "dardaarankiisii walaalnimo iyo himilooyinkii uu hiigsanayay."
Cabdiraxmaan Cusmaan Faarax oo ah da'dii ka yareyd Cabdillahi ayaa BBC-da u sheegay "in uu waayay walaal garabkiisa taagnaa markasta."
"Runtii waxbadan ayaan ku xasuustaa Cabdillahi, wuxuu ahaa nin walaalkey ah, waxan ahayn dad isla dhashay oo illaa yaraantoodii isla joogay. Cabdillahi wuxuu ahaa nin dadaal badan oo runtii in uu horumar gaaro jecel," Ayuu yiri Cabdiraxmaan oo la dhashay Cabdillahi.
"Wuxuu igu waanin jiray inaan horumar gaaro, wuxuu mar kasta ka fikiri jiray horumarka qoyskeena, waxaan dareemayaa in garabkayga uu ka baxay qof muhiima ah. cidlo ayaan dareemayaa!"
Qoysas aad u badan oo ku nool Muqdisho ayaa dareemaya xannuunka qarixii Soobe ee dhacay 14-kii Oktobar.
Sida dowladda Soomaaliya ay sheegtay 358 qof ayaa ku dhimatay, 54 kalena waala la'yahay ka dib qaraxaas ka dhashay gaari xamuul ah oo lagu raray waxyaabo qarxa.
Sawirro Sawirrada todobaadkan iyo sida looga jawaabay qarixii Soobe
Gawaarida xamuulka oo Xamar laga mamnuucay xilliyada qaar
Muuqaal Daawo: Qorshaha Farmaajo ka dib weerarkii Soobe
25 Oktoobar 2017